I-Apple TV + yeFilimu "Intlekele yaseMacbeth" yokuvala i-65th BFI London Film Festival | IPhone iindaba
I-Apple TV + 'Intlekele yaseMacbeth' iya kuvala i-65th BFI London Film Festival
UIgnacio Sala | | I-Apple tv, Izaziso
Enye yezona zinto zibalulekileyo zokubheja i-Apple TV + esizaziyo kwiinyanga ezidlulileyo, sizifumana kumdlalo bhanyabhanya Intlungu kaMacbeth, Umboniso bhanyabhanya owathengwa ngu-Apple amalungelo okugqibela kuka-Meyi. Lo mboniso bhanyabhanya, ibhaliwe kwaye yalathiswa nguJoel Coel (omnye wabazalwana bakaCoen) kwaye isekwe kumdlalo wokuqala obhalwe nguWilliam Shakespeare.
Okwangoku, akwaziwa ukuba uza kukhutshwa ixesha elingakanani kumdlalo bhanyabhanya nakwiqonga levidiyo. Nangona kunjalo, siyazi ukuba ifilimu iya kuqala kumnyhadala wokuvala uMnyhadala weFilimu waseLondon izakubanjelwa kwiHolo leRoyal Festival kwiZiko leSouthbank nge-17 ka-Okthobha.
Okwangoku, kuye kwaqinisekiswa oko UMlawuli kunye nombhali wombhalo uJoel Cohen uzokuzimasa. Abanye abadlali, abaquka uDenzel Washington noFrances McDormand, abakaqinisekisi ukubakho kwabo.
UTricia Tuttle, uMlawuli weFBI London Festival, uthi:
Sathandana noJoel Coen ngokulungelelaniswa komdlalo kaShakespeare waseScotland. Cwangcisa kwindawo yemilingo phakathi kweqonga kunye ne cinema, le yimveliso enomtsalane. Isilivere kunye ne-monochrome yokufota kwesilivere kunye ne-monochrome ithatha iiseti zemoody kwaye phantse iseti yomyili uStefan Dechant noCarter Burwell babhale inqaku lokuthakatha.
Kwaye ngelixa i-cast, equka iitalente ezininzi zase-Bhritane, igqwesile, uFrances McDormand no-Denzel Washington banomdla ngendima yesi sibini sinamabhongo ezopolitiko asikwayo. Uninzi lwethu luphulukene namava amakhulu escreen kunyaka ophelileyo, kwaye lo ngumbhiyozo ogqibeleleyo wale fomu yobugcisa etsala izithethe zamandulo zokubalisa amabali, kodwa ngamagunya omlingo ngokwenene wokudlulisa ukusondelelana kunye nomlinganiso kunye nomda.
Kulilungelo ukuvala i-LFF ngefilimu enolu hlobo lungaqhelekanga nokwamkela uJoel Coen kunye nabasebenzisana naye kulo mnyhadala.
Kunye noDenzel Washington kunye noFrances McDormand, bonke abanye abadlali bayabandakanya Umzingeli kaKathryn (IRoma), UCorey ukuthengisa (IKong, iKhakhayi Island), UAlex Hassell (Ngaba iNtaba ingaba), UBertie Carvel (IBhabhiloni), UHarry Melling (UHarry Potter uthotho) kunye UBrendan Gleeson (Efihliweyo eBruges).
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple TV + 'Intlekele yaseMacbeth' iya kuvala i-65th BFI London Film Festival
UNomad usungula i "Ulusu lwesikhumba" olutsha lolusu lwesibini lwe-iPhone 12 yakho
I-iPhone 13 ingabandakanya i-ID yobuso ehambelana neemaski